3D Print buuxieyey, Petg Filaments, ABS caaga buuxieyey - Lanbo
3D MOON laambad
ABS buuxieyey / 1.75 / 1kg
ABS buuxieyey /1.75/ 2KG
ABS buuxieyey /2.85/ 1kg
ABS buuxieyey /3.0 / 1kg
Uurqaadida buuxieyey / 1.75 / 1kg
Uurqaadida buuxieyey / 1.75 / 2KG
Uurqaadida buuxieyey / 2.85 / 1kg
Uurqaadida buuxieyey /3.0/ 1kg
spool hufan ee uurqaadida
Uurqaadida buuxieyey 2KG
Spool Transparent Of uurqaadida
3D Moon Siraaj
Buuxieyey Printer 3D Black (Orange)
Buuxieyey Printer 3D Black (Pink)
Buuxieyey Printer 3D Black (Purple)
Buuxieyey Printer 3D Black (Red)
Buuxieyey Printer 3D Black (White)
Buuxieyey Printer 3D (yellow dhaadheer)
Buuxieyey Printer 3D (Orange)
Buuxieyey Printer 3D (Pink)
Buuxieyey Printer 3D (red Purple)
Buuxieyey Printer 3D (Red)
Cixi sahay daabacaadda lanbo Co., Ltd.was aasaasay 2011and waxa uu ku yaalaa CIXI, Ningbo, Zhejiang,
riyaaqayaa helitaanka gaadiid habboon oo aad u qurux badan deegaanka.
Shirkadda Our daboolaa aag of 2000square mitir iyo 100 oo shaqaale.
Ma 3D wax daabacan nafta? oo waxaad qaadataan ...
Dad badan ayaa lacag bixisid si aad daabacaadda 3D, ugu horreeya oo dhan, jiidatay by waxyaalaha yar yar oo qurux badan daabacay 3D dareenka. Dheeraad ah, saaxiibada qaar ka mid ah daryeeli doonaa oo ku saabsan waxqabadka lagu daydo kala duwan ee madbacadaha 3D, iyo qalabka daabacaadda 3D la dayacay kiisaska intooda badan. Dhab ahaantii, qalabka daabacaadda 3D awoodo ...
Ogow wax uurqaadida ee 3D daabacay Mater ...
macaamiisha iyo saaxiibo badan oo i weydiiso haddii uurqaadida waa caag? Halkan waa hadal adag oo ku saabsan waxa ay tahay uurqaadida maanta. Uurqaadida waa soo gaabiyay Ingiriisi ah ee acid polylactic, kaas oo ku qoran sida: polylacticacid. Polylactic acid (uurqaadida) waa wax sheeko biobased iyo baaba'aysa ka noqde alaabta ceeriin soo jeediyay dhigay ...
Ma jirtaa ammaanka kasta oo 3D daabacay ELE ...
technology daabacaadda 3D ku salaysan yahay model ah digital, iyadoo la isticmaalayo qalab bondable sida birta budada ah ama caag ah si aad u daabacdo dhismeedka of lakabka shayga by lakabka. technology waxa uu leeyahay codsiyada in beerihii dahabka, kabaha, design warshadaha, dhismaha, injineernimada iyo dhismaha, ...
Shenwu South Road, Kandun Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Shiinaha